समाचार | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal | Page 514
एड्स रोग न्युनीकरणका लागि नाटक प्रर्दशनी
सन्तोष गौतम /विकल्प म्याग्दी मंसिर१५ गते । ‘दिगो विकास प्राप्तिको लागि एड्स महामारीको अन्त्य’ भन्ने मुल नाराका साथ मंगलबार म्याग्दीमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरि २८ औ विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ । दिवसको अवसरमा बेनी बजारको विभिन्न स्थानमा एड्स रोग न्युनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धी गर्ने उद्देश्यले सडक नाटक प्रर्दशन गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय […]
म्याग्दीमा कृषि र पशुपालन विकासका लागि छ करोड बजेट प्राप्त
सन्तोष गौतम/विकल्प म्याग्दी, मंसिर १५गते । सरकारले म्याग्दी जिल्लामा कृषि र पशुपालन विकासका लागि यस वर्ष छ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला पशु सेवा र कृषि विकास कार्यालय मार्फत कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि छ करोड १५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो […]
अस्पतालजन्य फोहोर ब्यवस्थापनमा चुनौती बढ्यो,जल तथा वातावरण प्रदुषणको समस्याका साथै मानव स्वास्थ्यमा असर
सन्तोष गौतम/विकल्प म्याग्दी मंसिर १५गते । स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा उत्पादन हुने फाहोर ब्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । अस्पतालजन्य फोहोरको सुरक्षित र व्यवस्थित बिर्सजनमा ध्यान नदिँदा जल तथा वातावरण प्रदुषणको समस्या बढ्नुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने खतरा बढेको हो । सोमबार साँझ बेनीमा एक्कासी निस्केको घुँवाको सदरमुकामबासी र त्यस आसपासका नागरीकलाई करिब तिन […]
झिँको महेन्द्र माविलाई प्रवासीद्धारा दुई लाख १० हजार नगद सहयोग
सन्तोष गौतम/विकल्प म्याग्दी १४ मंसिर । म्याग्दीको झिँमा रहेको महेन्द्र माविलाई सोमबार एक जना प्रवासीले दुई लाख रुपैया भन्दा बढी नगद सहित खेलकुद र ध्वनी सामाग्री सहयोग गर्नुभएको छ । अमेरीकामा बस्दै आउनुभएका पृथ्वीमान गर्बुजाले नगद एक लाख १० हजार रुपैयाँ विद्यालयमा आयोजित एक समारोहमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । उहाँले एकएक थान भलिबल, बास्केटबल, फुटबल […]
खेलकुदको विकास र सामाजिक कार्य गर्न गलेश्वर शिव यूवा क्लवको गठन
विकल्प /म्याग्दी मंसिर १४ गते । बेनी नगरपालिका–९ घतानस्थित गलेश्वरका यूवाले धार्मिक, सामाजिक तथा खेलकुद गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न यूवा क्लवको स्थापना गरेका छन् । जिल्लामै प्रमुख धार्मिकस्थल गलेश्वर बजार तथा आसपासका क्षेत्रका यूवाको भेलाले दिवाकर बुढाथोकी मगरको अध्यक्षतामा गलेश्वर शिव यूवा क्लवको स्थापना गरेका हुन् । क्लवको उपाध्यक्षमा मोहन कार्की ‘विवश’ विरबहादुर मगर शेरपुञ्जा, सचिव […]
माउन्ट एभरेष्ट विद्यालयद्धारा खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष र खेलाडीहरु सम्मानित
विकल्प/म्याग्दी मंसिर १४ गते । बेनीमा रहेको माउन्ट एभरेष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयले जिल्लाको खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि योगदान गरेको भन्दै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्षहरुलाई आज सम्मान गरेको छ । साथै विद्यालयले जिल्लाबाट विभिन्न खेलहरुमा उत्कृष्ट पदक प्राप्त गर्न सफल खेलाडीहरुलाई पनि सम्मान गरेको हो । विद्यालयले खेलकुद विकास समितिका ६ जना पुर्व अध्यक्ष, […]
पर्यटकको रोजाइमा घोरेपानीको ‘मगर सङ्ग्रहालय’
राम थापा/बागलुङ मंसिर १४ गते । अन्नपूर्ण पदयात्रामा निस्कने पर्यटकका लागि म्याग्दीको घोरेपानीमा रहेको ‘पुनमगर सङ्ग्रहालय’ ले आकर्षण थपेको छ । त्यहाँका रैथाने पुनमगरहरुको कला, संस्कृति र रीतिरिवाज झल्कने सङ्ग्रहालयले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लोभ्याएको छ । १५ वर्षअघि स्थापित सङ्ग्रहालयमा सयौँ प्रकारका मगर पहिचान झल्कने वस्तु तथा सामग्री राखिएको छ । पुनहिल आमा समूहको […]
कोरल्ला नाकाको अवस्था अध्ययनका लागि संसदीय टोली मुस्ताङमा
सन्तोष गौतम/विकल्प म्याग्दी मंसिर १४ गते । उत्तरी मित्रराष्ट्र चिनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाकाको बस्तुस्थिती अध्ययनका लागि संसदीय टोली सोमबार मुस्ताङ पुगेको छ । व्यवस्थापीका संसद अन्तरगतको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीले कोरल्ला नाकाको बस्तुअवस्था अध्ययन सुरु गरेको हो । टोलीमा सांसदहरु श्रीमाया थकाली (मुस्ताङ), प्रकाश शर्मा पौडेल […]
बेनीका युवाले कालिगण्डकी नदीबाट विजुली निकाले
विकल्प /म्याग्दी मंसिर १३ गते । बेनीका एक युवाले कालीगण्डकीबाट विजुली निकालेका छन् । सदरमुकाम बेनीबजास्थित कालिगण्डकी नदीबाट उपकरण जडान गरी विजुली उत्पादनको प्रक्रिया सुरू गरेका छन् । म्याग्दी उर्जा प्राविधिक सेवा केन्द्रका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले खुल्लामञ्च नजिक कालिगण्डकीबाट विजुली उत्पादन सुरु गर्नुभएको हो । ‘नदीलाई उपयोग गरेर विजुली उत्पादन सुरु गरेको छु । बेनीबजारबाट […]
कृषकहरुलाई मौरीपालन तालीम
विकल्प /म्याग्दी मंसिर १३ गते । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको आयोजनामा मौरीपालन सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय तालीम सम्पन्न भएको छ । तिन दिनसम्म सञ्चालन भएको तालीमको शनिबार पिप्ले १ घुमाउने तालमा ब्यवहारीक प्रशिक्षणसंगै एक औपचारीक कार्यक्रमको आयोजना गरि समापन गरिएको हो । परम्परागत रुपमा घरायसी उपभोगका लागि मौरीपालन गर्दै आएका कृषकहरुलाई मौरीपालन विस्तारमा अग्र्रसर र ब्यवसायीक […]
साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका विपन्न घरपरिवारलाई युकेबाट दुइलाख सहयोग
ठाकुरप्रसाद आचार्य/विकल्प म्याग्दी,मंसिर १३ गते । रोजगारीको शिलसिलामा साउदी अरवको रियादमा ज्यान गुमाएका म्याग्दीको भगवती–९का कमल भण्डारीको घरपरिवारलाई युकेमा वस्ने म्याग्देलीहरुले दुइलाख सहयोग गरेका छन् । कार्तिक १२ गते कामको शिलशिलामा दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका भण्डारीको घरपरिवारको अबस्था अत्यन्तै कमजोर रहेकाले घरपरिवारको राहतको लागि आर्थिक संकलन सुरु गरिएको हो । रोजगारीको शिलशिलामा युकेमा रहेका भगवती […]
शनिवार विहान जेसीज कपको फाईनल खेल
बेनी /विकल्प मंसिर ११ गते । बेनीको खुल्ला मञ्चमा जारी जेसीज कपको फाइनल खेल शनिवार विहान हुने भएको छ । बेनी स्थित न्यु वेष्ट प्वाईन्ट आवाशिय उच्च मावि र माउन्ट एभरेष्ट आवाशिय उच्च मावि बेनीमा सञ्चालीत अन्तर मावी जिल्ला स्तरीय १४ औ जेसीजकप फुटबल प्रतियोगिताको फाईनलमा पुगेका छन् । शुक्रबार भएको सेमीफाईनलमा प्रकाश उच्च मावि […]
कसको छ भाग्य ? बेनीमा भोली विहान गोलापोलाको माध्यमबाट ग्यास बाडीने
सन्तोष गौतम /विकल्प म्याग्दी मंसिर ११ गते । करिब दुई महिनापछि सिमीत मात्रामा बेनीमा भित्रीएको खाना पकाउने एलपी ग्याँस शनिबार वितरण गरिने भएको छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय प्रशासनको पहलमा बिहीबार राती बेनी ल्याइएको चार सय सिलीण्डर गृहलक्ष्मी कम्पनीको ग्यास जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । माग भन्दा दश गुण कम मात्रै […]
न्यू धौलागिरी सहकारीद्धारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई दुइलाख सहयोग
विकल्प/म्याग्दी मंसिर ११ गते । सदरमुकाम बेनीबजारमा रहेको न्यू धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले गलेश्वरमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनाउन दुइ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ । संस्थाको १६ औँ साधारणसभाको अवसरमा एकबर्षको अवधीमा संस्थाले गरेको कामका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले शुक्रबार बेनीमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको अवसरमा सहकारीले गलेश्वर […]
न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र त्रुटीरहित बनाउनुपर्ने
सन्तोष गौतम/विकल्प म्याग्दी ११ मंसिर । म्याग्दीको बेनीमा शुक्रबार अदालत र अर्धन्यायीक निकायका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सहायक कर्मचारीहरुको लागि क्षमत्ता विकास तालीम सुरु भएको छ । दुई दिन सम्म सञ्चालन हुने तालीममा म्याग्दी स्थित अदालत, प्रशासन, प्रहरी, वन, मालपोत, सरकारी वकील कार्यालयका करिब २५ जना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ । तालीमको उद्घाटन गर्नुहुदै पुनरावेदन […]
Previous Page«‹512513514515516›»Next Page